Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Weerar Qasaaro badan dhaliyay oo maanta ka dhacay magaalada Kabul (Daawo Sawirada)
August 18 2017 15:37:47
Weerar Qasaaro badan dhaliyay oo maanta ka dhacay magaalada Kabul (Daawo Sawirada)
Weerar toos ah iyo qaraxyo ismiidaamin ah ayaa maanta lagu qaaday xarun ay Magaalada Kabul ku leeyihiin ciidamada gaarka ah ee amniga dalka Afghanistan, ee ka tirsan hay’adda sirdoonka dalkaasi .
Nin waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa isku qarxiyay albaabka xaruntaasi laga galo, waxaana xiligaa kadib xarunta weeraray dagaal adagna la galay Ciidamadii halkaasi ku sugnaa maleeshiyada hubeesan sidoo kale xirnaa waxyaabaha qarxa.
Inta la xaqiijiyay 28-qof ayaa ku dhintay weerarkaasi iyo qaraxyadii la socday, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarkaasi dad ka badan 320-qof, waxaana qasaaro badan weerarkan uu kasoo gaaray dad shacab ah oo ka agdhawaa xarunta la weeraray.
Dagaal u dhaxeeyay dableydii weerarka geesatay iyo ciidamada amaanka ayaa halkaasi ka dhacay mudo saacado ah, waxa ayna ciidamada saraakiishooda sheegeen in weerarkaasi ay soo afjareen ayna dileen dhamaan ragii weerarka soo qaaday.
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa weerarka cambaareeyey, wuxuuna sheegay in dad badan lagu dilay sidoo kale lagu dhaawacay, waxa uuna weerarkan ku tilmaamay in ay muujineyso guuldarda soo gaartay kooxaha dowladiisa kasoo horjeeda.